किन हुँदैछ सामाजिक संजालमा रवि लामिछानेको तेजोबध ?
देवी खनाल । प्रकाशित मिति : शनिबार, पुस २१, २०७५
बेला बेलामा सामाजिक संजाल तथा विभिन्न मिडियाहरुमा मिडियाकर्मी रवि लामिछानेको निकै नै चर्चा हुने गर्दछ । कहिले विदेशी ग्रीन कार्ड हुँदा हुँदै नेपाली नागरिकता समेत आफूसँगै राखको आरोप लाग्छ उनलाई । कहिले विभिन्न घटनाहरुलाई लाइभ देखाउने नाममा प्रेतात्माको लाइभ भन्दै गर्जिन्छन् र झुट सावित हुँदै विवादित बन्दछन् । कहिले पुलिस शैलीमा अपराधीमाथि आइलाग्छन् र सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट हुन्छन् ।
हो राम्रो काम गर्नु राम्रो नै हो र जताततै वाही वाही कमाउनु त्यो झन राम्रो हो तर विवादित काम गरेर समाजमा राम्रो छविलाई आफैं धमिल्याउनु कदापि जायज मान्न सकिँदैन । केही राम्रा काम गरेर चर्चामा आउनु पिसावको न्यानो हुन सक्छ तर हजारौं राम्रा कामलाई एउटै नराम्रो सिध्याइदिन्छ यो उनलाई हामीले सम्झाउन नपर्ला राम्रो व्याख्याता पनि हुन् उनी ।
आफ्नो कमजोरी कति सहज रुपमा स्पष्टीकरण दिएर सुधार्छन् उनी भन्ने कुरा नेपाली जनतामा जगजाहेर छ । उनी २४/२५ वर्ष अगाडि विवाह बन्धनमा बाँधिएका एक पुरुष हुन् । उनी सामाजिक घटनाहरुलाई केलाएर जो कसैले अरुमाथि अन्याय गरेको छ भने अन्यायी माथि कारवाही तथा पीडितलाई सान्त्वना र न्याय दिलाउने अभियानमा देखिन्छन् । न्युज २४ च्यानलको ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम मार्फत आफ्ना गतिविधिलाई जनतामा पुर्याउने कोसिसमा लागेका उनै रवि यतिबेला सामाजिक संजाल देखि विविध मिडियामा चर्चाको शिखरमा छन् ।
यतिबेला उनी विवादास्पद ढंगले आफ्ना दुई छोरी सहित रहेकी उनी पूर्व पत्नी ईशा श्रेष्ठ लामिछानेसँग सम्बन्ध विच्छेदको नाटक मंचनको कारणले विवादमा छन् ।
सामाजिक संजालमा भेटिएका उनी विरुद्ध तथा उनलाई समर्थन गरिएका स्टाटसहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रदीप देवान लेख्नुहुन्छः
हाम्रो समाज अबिकसीतको कारण हामी सबैमा धेर थोर नकारात्मक चेत बड़ी छ १ ग़रीबी र अन्यामा परेकाहरू लाई आफ़नो स्थान बाट सकदो उद्धार ग़र्ने रबी लामिछानेजीको व्यक्तिगत र पारिवारिक बिषयको बारे नकारात्मक टिप्पनि आऊँनुको पछाड़ी पनि यही चेतको उपज हुन ११ समाजिक योगदान निरन्तरता रहोस शुभकामना रबीजी १११
मुकुन्द कार्की लेख्नुहुन्छः
पहिलो श्रीमतीसंग डिभोर्स नभई दोस्रो महिलाबाट छोरा जन्मिन्छ। फेरि विनाकारण दोस्री श्रीमती र बच्चासंग सम्पर्क विच्छेद गरेर उसंग पनि डिभोर्स नगरी अब आफू सिंगल भएको भन्दै निकिता पौडेलसंगको सम्बन्धलाई सांकेतिक रूपमा स्विकार गर्छन् । त्यस्तो चरित्र हुनेलाई रबिले व्यक्तिगत मामला भनेर छाडेको छैन। त्यस्ता मान्छेलाई उसले मिडियामा नाङ्गेझार पारेको छ। तर उसका सेनाहरू भने रबि सरको व्यक्तिगत मामलामा बोल्न पाउँदैनस भनेर खाउँला जस्तो गर्छन् के भा’को होला ! अचम्म !!
उनको बचाउ गर्दै निश्चल गिरी सुवास लेख्छन्ः
कानुनी रुपमा सकियको सम्बन्धमा तपाईंको प्रगति देख्न नसक्नेहरुले जे सुकै भनुन हामी बिश्वास गर्ने छैनम । तपाईं प्रती पुर्ण बिश्वास छ रबि सर । तपाईं अघि बढदै जानुस तपाईंको खुट्टा तान्न खोज्ने अन्धभक्त झोलेहरु जसरी हजुरको खुट्टा तानिरहेका छ्न त्यसरी नै खुट्टा झै जमिन मै रहने छन ।
राजेश राई उनलाई सम्झाउँदै लेख्छन्ः
प्रिय रवि लामिछाने ११
दुईवटा फुल जस्ती छोरीहरु हुदाहुँदै अर्को विदेशी महिलासँग सहबास गरेर सन्तान उत्पादन गर्न भ्यायौं । लु ठिकै छ । दुई श्रीमती र तीन सन्तान हुदाहुँदै तेश्रो श्रीमतीसँग विहेको तयारीमा छौं । ल, त्यो पनि ठिक छ । तर, डिभोर्सपछि पनि फुल जस्ता दुई छोरीको आमालाई आरोपित गरेर आफ्नो बहादुरीको स्टाटस लेख्नुलाई चहि ठिक मान्न सकिएन । लेखेका छौं, ‘मेरो डिभोर्सका कारण एक होइन, अनेक र लाजमर्दा छन् ।’ ती अबोध नानीहरुको आमा बिरुद्ध लेखेर तिमिलाई माया गर्नेको ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ नगर । फुल जस्ता छोरीहरु र एक बारको सुन्दर जिन्दगी तिमिलाई सुम्पिने श्रीमतीको आँशु लाग्ला ?
वास्तवमै भन्ने हो भने उनी अरुको गल्तीमा यति जंगली पाराले झम्टिन जान्छन् कि सबैले देखेको जानेको कुरा हो । उनी आफूमाथि आइपरेको यो खालको समस्यालाई उनले सजिलै समाधान गर्न सक्ने छैनन् । यो गल्ती वास्तवमै अरु कोहीले गरेको भए उनी साँच्चै नै नाँके डाँडी भाच्ने कुरा जसरी गर्थे सावित गरेर देखाउँथे नै ।
त्यसैले उनी अरुको घाउमा जसरी मह्लम पट्टी लगाउन तम्सिन्छन त्यसरी नै आफ्ना अबोध छोरीहरु र श्रीमतीको घाउमा मह्लम पट्टी लगाउन जरुरी छ । सामाजिक रुपमा आफूले बनाएर छविलाई जोगाइराख्न र उनले गरेको सामाजिक कार्यको उचाइलाई ढल्न नदिन सचेत बन्नै पर्छ ।